Qarax ruxay huteel kuyaala gudaha magaalada Muqdisho - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaQarax ruxay huteel kuyaala gudaha magaalada Muqdisho
January 25, 2017 Puntland Mirror Somalia 0
Qiiq hawada isku shareeray korka Muqdisho kadib qaraxa. [Sawirka: Twitter]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Qarax balaaran ayaa saakay oo Arbaco ah ruxay huteel kuyaala caasimada Soomaaliya ee Muqdisho, sida ay wararku sheegayaan.
Sida ay ilo-wareedyadu sheegeen, qaraxa ayaa waxaa daba socotay rasaasta qoryaha.
Huteelka la weeraray ee Dayax ayaa ah mid ay badanaa adeegsadaan saraakiisha dowladda iyo xildhibaanada, sida ay sheegeen saraakiishu.
Ma jirto wax faahfaahin deg deg ah oo ku aadan khasaaraha ka dhashay.
Ururka hubaysan ee Al-Shabab ayaa sheegtay masuuliyada weerarkaas, sida ay ku sheegeen warbaahintooda ugu weyn ee Radio Andalus.
Faahfaahin dheeri ah dib kala soco.
February 27, 2017 Qarax gaari oo lala eegtay saldhig milatari oo kuyaala duleedka Muqdisho